Miyuu ciyaari doonaa Gerard pique Kulanka PSG iyo Barcelona. Horyaalka Spain
Home Horyaalka Spain Miyuu ciyaari doonaa Gerard pique Kulanka PSG iyo Barcelona.
Miyuu ciyaari doonaa Gerard pique Kulanka PSG iyo Barcelona.
Waxay ahayd ku dhawaad seddex bilood tan iyo markii Gerard Pique uu ka dhaawacmay Barcelona Tan iyo wixii ka dambeeyay 21kii November ee ay ka horyimaadeen Atletico Madrid daafaca dhexe ee Barca ayaan mar kale ciyaarin.
Wuxuu dhaawac ka soo gaadhay jilibka midig isla toddobaadkan waxay noqon doontaa sida saxda ah seddex bilood tan iyo dhaawiciisa Pique wuxuu ku laaban karaa tartanka isaga oo diyaar ah.
Joogitaanka Catalan ayaa ah warka wanaagsan ee ka soo baxa tababarka kooxda Barca maanta oo Axad ah Daafaca halyeeyga ah ayaa tababar la qaatay kooxda inteeda kale ka hor kulanka weyn ee kooxdiisa Talaadada ay la balansan tahay PSG.
Waxa macquul ah inuu ka hor yimaado Paris Saint Germain oo soo booqan doonto Camp Nou tartanka Champions League heerkiisa 16ka lugtii ugu horeysay Ronald Koeman ayaa mar kale heli doona daafaca khibradda leh.
Pique waa aasaaska xarunta difaaca Da’diisa iyo waaya aragnimadiisa 553 kulan oo uu u saftay Barca xirfadiisa iyo balanqaadkiisa ayaa la waayey bilihii ugu dambeeyay Laakiin Gerard wuxuu soo laaban karaa markii Barcelona ay aad ugu baahan tahay Wuxuu codsaday inuu tababar la qaato kooxda inteeda kale.
Sida laga soo xigtay ‘La Vanguardia’, Pique laftiisu wuxuu codsaday inuu ku biiro tababarka kooxda maanta oo Axad ah In kasta oo xaqiiqda Pique aan laga fileynin inuu soo laabto ilaa goor dambe soo kabsashadiisa si fiican ayey u dhacday daafaca dhexe ee Barca ayaa la filayaa inuu ciyaaro lugta hore isbuuca soo socda.
Khamiista iyo Jimcaha, wuxuu kordhiyay shaqadiisa si uu u arko sida jilibkiisu ahaa Kulankii tababarka ee axada wuxuu sameeyay horumar wanaagsan isagoo tababar la qaatay asxaabtiisa kale.
2dii Febraayo Pique wuxuu ku soo noqday tababarka kadib dhibaatadii dhacday Daafaca dhexe ayaa ku dhajiyay warbaahinta bulshada in uu bilaabay tababar shaqsiyeed maalintii uu 34 jirsaday.
Previous articleDiego Costa oo wadahadalo La bilaabay kooxda Palmeiras.
Next articleManchester United oo bar-bar dhac kala kulantay Kooxda West Bromwich Albion